အိမ်များ အတွက် ရောင်းရန်
6 အိပ်ခန်းများ အိမ် ရောင်းရန် အတွင်း Dagon Myothit (Seikkan), Yangon
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်(ID – 175)
Yangon, Dagon Myothit (Seikkan), Dagon Myothit (Seikkan)
Sale: Lks 13,000
ပိုင်ဆိုင်မှု အိုင်ဒီ: 175
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် သုံးထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ်အ၀န်းမှာ ၁၁၇၅၀ စတုရန်းပေ ရှိ ပါသည်။ အိမ်အကျယ်အ၀န်းမှာ ၁၁၈၇၃စတုရန်းပေရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်တွင် ဧည့်ခန်းနှစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် ခြောက်ခန်း၊ ဘုရားခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ ရေကူးကန်၊ မီးဖိုချောင်ခန်း နှင့် ရေချိုးခန်းများ ပါရှိပါသည်။ အိမ်မှ မြစ်ရှုခင်း ရှုစားနိုင်ပါသည်။ အိမ်အတွင်းအားလုံးကို ကျွန်းပါကေးခင်းကျင်းထားပါသည်။ ကားပါကင် တစ်ဆယ့်နှစ်စီး ရပ်နားနိင်သည့်မြေအလွတ်ရှိပါသည်။ မြေအမျိုးအစားမှာ ဂရံမြေအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
လုံးချင်းအိမ်၏ အရောင်းဈေးနှုန်းမှာ သိန်း ၁၃၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
1,091.58 Sq.M. Land area
Listing provided by , တာမွေမြိုနယ်, Tamwe, Tamwe, Yangon. has 1,045 other listings.
Other searches in Dagon Myothit (Seikkan)
ရောင်းရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း Dagon Myothit (Seikkan)
ငှားရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း Dagon Myothit (Seikkan)
ငှားကှနျဒို အတွင်း Dagon Myothit (Seikkan)